‌စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆) (၂/၂၀၁၈) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
(MY P-I) စီမံကိန်းအောက်မှ မြို့ရေပေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
Mini-grid Developer Coordination Meeting ကျင်းပပြုလုပ်
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆ /၂၀၁၇)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး အစီအစဉ် DRD မှ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ DRD ၏စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း
ကမ္ဘာဘဏ် ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်း (NEP) ၏မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးအစီအစဉ်သည် များမကြာမှီ အနာဂတ် ကာလများတွင် မဟာဓာတ်အားလိုင်း တိုးချဲ့သွယ်တန်းခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရရှိနိုင်သေးသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျေးလက်ဒေသများရှိ ကျေးရွာများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိစေရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။
Department of Rural Development 3
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဂျာမန်ဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ် (KfW)တို့ ပူးပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူ ရေး နှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဂျာမန်ဖွံ့ ဖြိုးရေးဘဏ် (KfW)တို့ ပူးပေါင်း၍ (KfW)၏အထောက်အပံ့ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင် တောင်ကြီး ကလော ရပ်စောက် ညောင်ရွှေနှင့် ဟိုပုံး မြို့ နယ်များအတွင်းရှိ ကျေးလက်လမ်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖွင့်ပွဲအား ယနေ့(၂၆.၅.၂၀၁၇)ရက်နေ့ နေ့လယ်(၂း၃၀)နာရီ အချိန်တွင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခန့်ဇော် မှ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လက်၍ တင်ဒါတင်သွင်းထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းအလိုက် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးလက် ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
Zawgyi - Nunc tincidunt, elit non cursus euismod, lacus augue ornare metus, egestas imperdiet nulla nisl quis mauris. Suspendisseapharetra urna. Morbi dui...
Department of Rural Development 2
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
Poverty Reduction through Rural Development: experiences from Mya Sein Yaung project beneficiaries in Yangon Region Brief Report Summary(ENG)
VDP Manual 1st (Myan)
VDP Manual 1st (Eng)
VDP Guideline (Myan)
VDP Guideline (Eng)
VDP Manual 2nd (Myan)
???????????????????? ??????????? ????????????? ???????
Poverty Reduction through Rural Development: experiences from Mya Sein Yaung project beneficiaries in Yangon Region Brief Report Summary